Nigeria’s Dangote group begins work in Zimbabwe – Zimbabwe Daily
ZIMBABWE – Geologists from Nigeria’s Dangote Industries Limited have reportedly begun work aimed at setting up a cement manufacturing plant in Zimbabwe.
According to Zimbabwe’s state-controlled newspaper, the southern African country’s secretary of mines and mining development, Francis Gudyanga, confirmed that the geologists were in the field, collecting samples for analysis.
This comes after the chief strategist of the multi-billion dollar company, Abdu Mukhtar, visited Zimbabwe last week and indicated that the Dangote group felt “comfortable and excited” about investing in the country.
Dangote industries, which has also expressed interests in coal mining and power generation in Zimbabwe, is owned by Africa’s richest man, Aliko Dangote.
ZIMBABWE – Geologists from Nigeria's Dangote Industries Limited have reportedly begun work aimed at setting up a cement manufacturing plant in Zimbabwe. According to Zimbabwe's state-controlled newspaper, the southern African country's secretary of m...